बाबु/आमाको मासिक तलब छ ३० हजार छोरोछारी पढ्छन मासिक ४० हजार शुल्क भएको स्कुलमा ? - Gokarna News from Nepal
बाबु/आमाको मासिक तलब छ ३० हजार छोरोछारी पढ्छन मासिक ४० हजार शुल्क भएको स्कुलमा ?
काठमाडौं – विद्यालयको शुल्क जति चर्को हुन्छ अभिभावकको मोह उति बढी हुन्छ । छोराछोरी ठूलो र महँगा स्कुलमा पढ्छन् भनेर देखाउन खोज्ने अभिभावकको आडम्बरको आडमा निजी विद्यालयले शुल्क बढाउन होडबाजी गर्छन् । रातदिन पैसा कमाउने उद्योगी र व्यापारी मात्र होइन मासिक तलब थाप्ने सरकारी कर्मचारीले पनि महँगा स्कुल रोज्छन् ।
अभिभावकलाई आम्दानीको स्रोत घोषणा गराउनुपर्ने अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन् उनले भने ‘गैरकानुनी स्रोतबाट पैसा कमाउने र बालबच्चाको शुल्क धेरै तिर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालयले अभिभावकलाई नो योर कस्टमर (केवाइसी) फारम भराउने र रकम लिँदा स्रोत घोषणा गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा स्रोतको घोषणा गरेजस्तै स्कुलमा पनि गर्नु उचित हुन्छ । त्यसो भयो भने कालोधन, घुसलगायत अनुचित आम्दानी गर्ने र खर्चमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट